သကြား ထက် ချိုသောအရာ
February 10, 2018 By Buzz Myanmar News in ပညာပေး, မှတ်မှတ်သားသား စကားများ, ရသ Tags: ဘဝ, သကြား, အချိုဓာတ်
အသက် အတော်ကြီး နေပြီ ဖြစ်တဲ့ လူကြီး တစ်ယောက် ဟာ အေးစက် မှုန်မှိုင်း နေတဲ့ လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်း လေး တစ်ခု ပေါ်မှာ ထိုင်နေ ခဲ့ပါတယ်။ မုတ်ဆိတ် ပါးသိုင်းမွေး ပရဗျစ်၊ စုတ်ပြဲ ညစ်နွမ်း နေတဲ့ အဝတ် အစား တွေနဲ့ လမ်းဘေးမှာ ထိုင်နေတဲ့ သူ့ကို လမ်းသွား လမ်းလာ လူတွေက သာမန် ကာ လျှံကာ ကြည့်သွား ကြရုံက လွဲလို့ ဘယ်သူ ကမှ အရေး တယူ မရှိ ကြပါ။ ဟုတ်ပါ တယ်လေ အိမ်မရှိ ယာမရှိ တောင်းရမ်း စားသောက် နေတဲ့ သူ့လိုလူ တစ်ယောက် ကို ဘယ်သူ ကများ ဆေးဖော် ကြောဖက် လုပ်ချင် ပါ့မလဲ။ ရေခဲလု မတတ် အေးချမ်း လွန်းတဲ့ ခုလို ချိန်မျိုးမှာ စုတ်ပြဲ နေတဲ့ သူ့ကုတ် အင်္ကျီ အဟောင်း လေး ထက် စာရင် နွေးနွေး ထွေးထွေး ထူထူ ထဲထဲ ရှိမဲ့ အင်္ကျီ မျိုးက သူ့ အတွက် သိပ်ကို လိုအပ် နေမှာ တော့ အမှန်ပါ။
ဒီအချိန်လေး မှာ အသက် ၃၅ နှစ် အရွယ်ခန့် ရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ဟာ ပလက်ဖောင်း လေး အတိုင်း လမ်းလျှောက် လာနေပါတယ်။ ပလက်ဖောင်း ပေါ် လျှောက် လာရင်းနဲ့ အမျိုးသမီး ဟာ ထို အဖိုးအို အနား ကို အရောက်မှာ ခြေစုံ ရပ်တန့် လိုက်ပါ တော့တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို ငုံ့ကြည့် လိုက်ကာ “ ဦးလေး .. ရှင် နေကောင်း ရဲ့လား” လို့ နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ဆို လိုက်ပါတယ်။ ကြည့် လိုက် တာနဲ့ အမျိုးသမီး ဟာ ချမ်းချမ်း သာသာ အထက်တန်း လွှာ ထဲက ဖြစ်မယ် ဆိုတာ အဖိုးအိုက သိလိုက် ပါတယ်။ သူမ ဟာ လှပ သစ်လွင်တဲ့ ထူထူ ထဲထဲ ကုတ် အင်္ကျီကို ဝတ်ဆင် ထားပြီး သန့်ရှင်း သပ်ရပ် လို့ နေပါတယ်။ ပြီးတော့လဲ သူမ ကို ကြည့်ရတာ ငတ်မွတ်ခြင်း၊ ဆာလောင်ခြင်း ဆိုတာ ကို ဘယ်သော အခါမှ ခံစားခဲ့ရဖူးပုံ မပေါ်ပါ။ ဒီလို အမျိးသမီး တစ်ယောက် က သူနဲ့ လာပြီး စကားပြောဆို ပတ်သက် ဖို့ဆိုတာ အကြောင်းကို မရှိဘူးလို့ သူက ထင်လိုက် ပါတယ်။ ဒီ အ မျိုးသမီး ဟာ လည်း တစ်ခြား လမ်းသွား လမ်းလာ တွေလိုဘဲ သူ့ကို ရယ်စရာ လုပ်ဖို့ စနောက်ဖို့ သက်သက်နဲ့ စကား လာပြော နေတာ သာ ဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် လဲ အမျိုးသမီးကို “ ခင်ဗျား ကိုယ့်လမ်းကို သွားပါ။ ကျုပ် တစ်ယောက် တည်း အေးအေး နေနေ တာကို မနှောက်ယှက် စမ်းပါနဲ့ ” လို့ အော်ဟစ်ပြီး ပြော လိုက်ပါတယ်။
အံ့သြ စရာက ထို အမျိုးသမီး ဟာ သူ့ရဲ့ အော်ဟစ်သံ ကို ကြောက်လန့် ပြီး ထွက်သွား တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ နေရာမှာ ဆက်ပြီး ရပ်နေ တုန်းပါ။ ညီညာပြီး ဖြူဖွေး လှပနေတဲ့ သွားတွေကို ပေါ်အောင် ပြုံး လိုက်ရင်းက “ ရှင် ဗိုက်ဆာ နေသလား ” လို့ သူ့ကို မေးပြန် ပါတယ်။ “ မဆာပါဘူး ကျုပ်က သမ္မတကြီး နဲ့ အတူတူ ညစာ စားပြီးပြီ ခင်ဗျား သာ ခု ချက်ခြင်း ဒီက ထွက်သွား စမ်းပါဗျာ ” လို့ သူက စိတ်ပေါက်ပေါက် နဲ့ ရွဲ့ပြီး ပြန်ဖြေ လိုက် ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဟာ သူ့အနားက ထွက်ပြီး မသွား သလို အပြုံးလဲ မပျက် ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူ့ဘေးနား ထိုင်ချ လိုက်ပြီး အဖိုးအို ရဲ့လက်မောင်းတွေ ကို အသာအယာ ဆုပ်ကိုင် လိုက်ချိန် မှာတော့ “ ဟာ ခင်ဗျား ဘာလုပ် တာလဲ ကျုပ် ပြောပြီး ပြီလေ။ ကျုပ်ကို မနှောက် ယှက် ပါနဲ့။ ခင်ဗျား ဒီနေရာ က ထွက်သွားပါ” လို့ အဖိုးအို ဆီက ဒေါသ တကြီး အော်ဟစ်သံ က ဟိန်းထွက် လာ ပါတော့တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ရဲအရာရှိ တစ်ယောက် ရောက် လာပြီး “ အစ်မကြီး ပြဿနာ တစ်ခုခု ဖြစ်နေ သလား.. ကျွန်တော် ဘာများ ကူညီ ပေးရ ပါမလဲ ” လို့ မေးလာ တော့ အမျိုးသမီးက “ ဘာ ပြဿနာ မှ မရှိပါဘူး ရဲအရာရှိ ကြီးရယ်။ ဒီလူကို မတ်တပ်ရပ် နိုင်အောင် ကျွန်မ ကြိုးစား နေတာပါ။ ကျွန်မ ကို တစ်ဆိတ် လောက် ကူညီ ပေးပါလား ရှင်.. ” ရဲ အရာရှိ ဟာ သူ့ခေါင်း ကို ကုတ် လိုက်ရင်း “ ဒီအဖိုးကြီး ဂျက် ဟာ ဒီနေရာမှာ နေလာတာ နှစ် တော်တော် ကြာပါပြီ၊ သူဟာ ဘယ်သူ့ကို မှ တော့ ဒုက္ခ မပေးခဲ့ပါဘူး၊ သူ့ကို ဘာများ လုပ်မလို့ ပါလဲ ” လို့ မေးလိုက် ပါတယ်..
“ရှင် ဟိုနား က ကော်ဖီဆိုင်လေး ကို တွေ့တယ် မဟုတ်လား။ ကျွန်မ သူ့ကို အဲဒီဆိုင်လေး ထဲကို ခေါ်သွားပြီး တစ်ခုခု ကျွေးချင် တယ်။ ပြီးတော့လဲ ဒီလောက် ချမ်းအေး လွန်း တဲ့ ရာသီဥတု ဒဏ်ကနေ ခနလေး ဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို လွတ်မြောက် စေချင်ပြီး နွေးနွေး ထွေးထွေး နေစေ ချင် ပါတယ် ”
“ ခင်ဗျား ရူး နေသလား ကျုပ် အဲဒီ အထဲကို မသွားချင်ဘူး ” အကြောက် အကန် ငြင်းဆန် နေရင်း မှာဘဲ သန်မာတဲ့ လက်နှစ်ဖက် တွေနဲ့ သူ့ကို ဆွဲထူ မခြင်း ကို ခံလိုက် ရပါတယ်။ “ ရဲ အရာရှိကြီး ကျုပ်ကို လွှတ်ပါဗျ.. ကျုပ် အေးအေး ဆေးဆေး နေပါ ရစေ၊ ကျုပ် ဘာအမှား မှလဲ လုပ်ထား တာ မဟုတ်ဘူး ” လို့ ဆိုင် ကို ဆွဲခေါ် လာတဲ့ လမ်း တစ်လျှောက် မှာ လည်း အဖိုးအို ဂျက် ဟာ အော်ဟစ် ရုန်းကန် နေတုန်း ပါဘဲ။
“ ခင်ဗျား အတွက် အကောင်းဆုံး အခြေအနေ ကို ဖန်တီး ပေး နေတာ ကို မမိုက်မဲ ချင် စမ်းပါနဲ့” ရဲ အရာရှိ က လေသံ ခပ်မာမာနဲ့ သူ့ကို ပြန်ပြော ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အမျိုးသမီး ကြီးနဲ့ ရဲအရာရှိ ဟာ ခက်ခက် ခဲခဲနဲ့ သူ့ကို ကော်ဖီ ဆိုင်လေး ထဲကို ရောက်အောင် ဆွဲခေါ် လာ နိုင်ခဲ့ပြီး ဆိုင်ရဲ့ အတွင်း ဘက် ခပ်ကျကျ ကောင်တာ အနီး မှာ ထိုင်စေ လိုက်ပါတယ်။ အချိန် က မနက်စာ စားချိန် ကျော်သွားပြီး နေ့လည်စာ စားချိန်လဲ မရောက်သေး တဲ့ အတွက် ဆိုင် အတွင်း ထဲမှာတော့ လူသူ ရှင်းလင်း နေပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ မန်နေဂျာ ဖြစ်သူ ဟာ စားပွဲ တွေကို ကျော်ဖြတ် ပြီး သူတို့ရဲ့ စားပွဲ မှာ လာရပ် ပြီး မေးပါတယ်။
“ ရဲအရာရှိ ခင်ဗျာ.. ဘာများ ဖြစ်လို့ ပါလဲ.. ဒီအဖိုးကြီး က ခင်ဗျား တို့ကို ဒုက္ခများ ပေးနေ လို့လား ”
“ ဘာမှ ဒုက္ခ မပေး ပါဘူး။ သူ့ကို ဒီအစ်မကြီး က အစားအသောက် ကျွေးမွေး ချင်လို့ ခေါ်လာ တာပါ.. ” ရဲအရာရှိရဲ့ စကား အဆုံးမှာ “ အိုး ဒီနေရာ ဟာ ဒီလို လူမျိုးတွေ နဲ့ သင့် တော်တဲ့ နေရာ မဟုတ် ပါဘူး ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် တို့ ဆိုင်ဟာ လူကြီး လူကောင်းတွေ ဝင်ထွက် သွားလာ စားသောက် တဲ့ ဆိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပေါ် က ဒီလို စုတ်ပြတ်ပြတ် လူ တစ်ယောက် က ကျွန်တော် တို့ ဆိုင်ထဲမှာ လာ စားနေတာ သူများတွေ တွေ့ သွားရင် ဆိုင်နာမည် ပျက်ပြီး ကျွန်တော် တို့ ဆိုင်ရဲ့ စီးပွားရေး ကို ထိခိုက် ပါလိမ့်မယ်။” လို့ ဆိုင် မန်နေဂျာ က ပြောလိုက် ပါတယ်။
“ ကဲ အမျိုးသမီး ခင်ဗျား တွေ့တယ် မဟုတ်လား။ ကျုပ်ပြော ခဲ့သား ဘဲ .. ဒီလို နေရာ ကို ကျုပ် မလာချင် ပါဘူးလို့.. ကျုပ် သွားတော့ မယ်၊ ဒီလို နေရာမျိုး ကိုလဲ ဘယ်တော့မှ ထပ် မလာဘူး.. ” အဖိုးအို ဂျက်က သွား တစ်ချောင်းမှ မရှိတော့တဲ့ နှုတ်ခမ်း တွေ ကို ဖွင့်ဟရင်း ဒေါသ ဖြစ်စွာ ပြော လိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသမီး ဟာ ဆိုင်ရဲ့ မန်နေဂျာ ကို သေချာ ကြည့်လိုက်ပြီး ပြုံးပြ လိုက်ရင်းက “ မန်နေဂျာ.. ရှင် ဒီလမ်းမကြီး ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အက်ဒီဂရုပ် ရဲ့ ဘဏ် လုပ်ငန်း စုကြီး ကို သိတယ် မဟုတ် လား. ” လို့ မေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆိုင်မန်နေဂျာ က စိတ်မရှည် တဲ့ လေသံနဲ့ “ သိပါတယ်.. သူတို့ဟာ အပတ်စဉ် တိုင်း ကုမ္ပဏီ အစည်းအဝေး ကို ကျွန်တော် တို့ဆိုင်ရဲ့ အထူးခန်း မှာ အမြဲ လုပ် ပါတယ်။ ဘာဖြစ် လို့ပါလဲ ” လို့ပြန်ဖြေ ပါတယ်။
အမျိုးသမီးက “ ဒါဆိုရင် ရှင်တို့ ဆိုင်မှာ လုပ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ အပတ်စဉ် အစည်း အဝေး ကြောင့် ရှင်တို့ဆိုင် ရဲ့ အစားအသောက်တွေ ပိုပြီး ရောင်း ခဲ့ရတဲ့ အတွက် သူတို့ဟာ ရှင်တို့ဆိုင်ကို တစ်ဘက် တစ်လမ်း က အကျိုးပြု နေတယ် ဆိုတာတော့ ရှင် လက်ခံတယ် မဟုတ်လား.. ”
“အဲဒီကိစ္စ ခင်ဗျား နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင် ပါတယ်.. ” မန်နေဂျာ က ဒေါသ ထွက် လာပုံ ရတဲ့ လေသံ နဲ့ ပြန်ပြော ပါတယ်။
“ကျွန်မ က အဲဒီ ဘဏ် လုပ်ငန်းစုရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိ ချုပ် မစ္စ ပင်နီလုပ် အက်ဒီ ပါ.. ”
“ဗျာ…. ” အမျိုးသမီး ရဲ့ နာမည် လည်း ကြား လိုက်ရော မန်နေဂျာ ရဲ့ အမူအယာ က ချင်ခြင်း ဘဲ ပြောင်းလဲ သွားပါတယ်.။
အမျိုးသမီး က နောက် တစ်ကြိမ် ထပ်ပြုံးလိုက်ရင်း “ကျွန်မက ခါတိုင်း လုပ်တဲ့ အဲဒီပွဲနဲ့ မတူတဲ့ စားသောက် ပွဲလေး တစ်ခု ကို အခု ချက်ခြင်း ကျင်းပ ချင်ပါတယ်။ ရှင်တို့ဆိုင်ရဲ့ အကောင်း ဆုံး စားသောက် စရာတွေ ယူလာ ခဲ့ပါ.. ”
စားပွဲမှာ ရပ်နေ ဆဲ ဖြစ်တဲ့ ရဲအရာရှိ ကို တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ပြီး “ ရဲ အရာရှိကြီး ကိုလည်း ကျွန်မတို့ နဲ့အတူတူ စားသောက် ဖို့ ဖိတ်ခေါ် ပါတယ်.. ”
“တော်ပါပြီ ခင်ဗျာ ကျေးဇူးပါ.. ကျွန်တော် က တာဝန် ချိန်တွင်း ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် စားဖို့ မဖြစ် နိုင်ပါဘူး”
“ဒါဆိုရင် အပြန် ကို ကော်ဖီ တစ်ခွက် လောက်တော့ ယူသွား ပါရှင်.. ”
“ကောင်း ပါပြီ ဗျာ .. ကော်ဖီတော့ ယူသွား ပါ့မယ်.. ”
ရဲ အရာရှိ စကား အဆုံးမှာ မန်နေဂျာ က
“ကျွန်တော် ရဲအရာရှိ ယူ သွားဖို့အတွက် ကော်ဖီ တစ်ခွက် ယူလာပေးပါ့မယ်.. ဒီဝိုင်း အတွက် လဲ အကောင်းဆုံး အစား အသောက် တွေ ကို ယူလာ ခဲ့ပါ့ မယ် ခင်ဗျာ ” လို့ပြောပြီး မန်နေဂျာ က စားပွဲ ကနေ ထွက်ခွာ သွား ပါတယ်။
မန်နေဂျာ ပြန်ထွက် သွားတာ ကို စောင့် ပြီး ရဲ အရာရှိ က အမျိုးသမီး ကို “ ခင်ဗျား သူ့ကို လူမှန် နေရာမှန် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေး လိုက်တာဘဲ ” လို့ လှမ်းပြော လိုက် ပါတယ်..
“ ကျွန်မ ဒီလို တော့ မရည်ရွယ် ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ထုတ် မပြောရင် မဖြစ်တော့ တာမို့ ထုတ်ပြော လိုက် ရတာပါ။ ကျွန်မ အနေနဲ့ အန်ကယ် ဂျက် ကို ဒီခေါ် လာတာ အကြောင်း အများကြီး ရှိပါ တယ်..” လို့ ပြော လိုက်ပြီး အမျိုးသမီး ဟာ ထိုင်ခုံပေါ် ထိုင်ချ လိုက်ပါတယ်. ထို့နောက် အဖိုးကြီး ဘက် ကို လှည့်ပြီး စကား စတင် ပြောပါတယ်။
“ အန်ကယ် ဂျက်… ရှင်ကျွန်မ ကို မှတ်မိ လား.. ”
အဖိုးအို ဂျက် ဟာ အမျိုးသမီး ကြီးရဲ့ မျက်နှာ ကို သေသေ ချာချာ စူးစမ်းစွာ ကြည့်နေပြီး “ ကျုပ်ထင်တာ ခင်ဗျားဟာ ကျုပ်ကို ရင်းရင်း နှီးနှီး သိနေပုံဘဲ”
“ဟုတ်ပါတယ် .. ကျွန်မ ရုပ်ရည်က ဟိုတုန်း ကထက် ရင့်ရော် သွားခဲ့ ပါပြီ.. အခု အချိန်မှာ ငွေကြေး ဥစ္စာ အရာရာ ပြည့်စုံ ကောင်း ပြည့်စုံနေ ပြီ လို့ ဆိုနိုင် ပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ ငယ်စဉ် ကာလ ရှင် ဒီဆိုင် မှာ အလုပ် လုပ် ခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်တွေ၊ အေးခဲ နေတဲ့ ခုလို ရာသီမျိုးမှာ ဆာလောင် ငတ်မွတ်စွာနဲ့ လမ်းတကာ လျှောက်ပြီး အစားလေး တစ်လုပ် အတွက် ဆိုင်တွေ ဆီမှာ အလုပ်တောင်း ခဲ့ရဖူး တဲ့ အချိန်တွေ ကို ဘယ်တော့ မှ မမေ့ပါ ဘူး ရှင်…”
ဘေးနား က နားထောင် နေတဲ့ ရဲအရာရှိ ထံမှ အံ့သြ တကြီး လေသံ က လွှတ်ခနဲ ထွက်ကျ လာပါတယ်.. ဒီလို ဂုဏ်သရေရှိ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ဟာ ဆာလောင် မွတ်သိပ်စွာ နဲ့ လမ်းတွေ ပေါ်မှာ လျှောက် သွားခဲ့ ဖူး တယ် ဆိုတာ ကို သူဘယ်လိုမှ ယုံကြည် လက်ခံ နိုင်ပုံ မရပါ။
အမျိုးသမီး က သူ့ဘဝ နောက်ကြောင်း ကို စတင်ပြီး ရှင်းပြ ပါတယ်။ “ ကျွန်မဟာ အဲဒီအချိန် က ကောလိပ်ကျောင်း က ထွက်လာ ကစ ဒီမြို့ကလေး ကို အလုပ်ရှာ ဖို့ ရောက် လာပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးချင် တော့ အလုပ် တစ်ခု တလေမှ ကို တော်တော် နဲ့ ရှာလို့ မရခဲ့ ပါဘူး။ ဘယ်သူ ကမှ လည်း အလုပ် မပေး ခဲ့ကြ ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ လက်ထဲ မှာ ပြားစေ့လေး နည်းနည်း ကလွဲလို့ ဘာမှ မကျန်တော့ တဲ့အခါ အခန်း ငှားခ မပေး နိုင်တော့ တဲ့ ကျွန်မ ကို အခန်း ပိုင်ရှင်က မောင်းထုတ် လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ လ ရဲ့ ပြင်းလွန်း တဲ့ အအေးဒဏ် အောက်မှာ ခိုနား ရာ မရှိ၊ ငတ်ငတ် ပြတ်ပြတ် ဆင်းဆင်း ရဲရဲနဲ့ လမ်းတွေ ပေါ်မှာ လျှောက်သွား နေခဲ့ရင်း နောက်ဆုံး မှာ ဒီနေရာ လေး ကို စားစရာ တစ်ခု တလေ ရလို ရငြား ရောက်လာ ခဲ့ပါတယ်။”
အဖိုးကြီးဂျက် ဟာ ပါးစပ်ကို ဟလိုက်ပြီး “ အိုး ကျုပ် မှတ်မိပြီ။ အဲဒီ တုန်းက ကျုပ်ဟာ ဟိုနား က ကောင်တာ မှာ ရပ် နေခဲ့တာလေ။ ခင်ဗျား က ကျုပ်ကို မေးတယ်.. အစား အသောက် နည်းနည်း ပေးပါ.. ဆိုင်မှာ ရှိတဲ့ အလုပ် ကို လုပ်ပေး ပါ့မယ် လို့ တောင်းဆို တယ်လေ။ ဆိုင် ဝန်ထမ်း မဟုတ် တဲ့ အပြင်လူ ကို အလုပ် ခိုင်းတဲ့ အချက် ဟာ ဆိုင်ရဲ့ စည်းကမ်း ချက်ကို ဖောက်ဖျက် ရာ ကျတဲ့ အ တွက် အလုပ် မပေး နိုင်ပါဘူး လို့ ကျုပ်က ပြောခဲ့ တယ်ေ လ။ ”
“ဟုတ်ကဲ့ .. ကျွန်မ သိပါတယ် အန်ကယ် ဂျက်။ အန်ကယ် ဟာ ကျွန်မ တစ်သက် မြင်ဖူး သမျှထဲမှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ အသား ညှပ် ဆင်းဝစ်ကြီး တစ်ခုနဲ့ ကော်ဖီ တစ်ခွက် ကို ပေးပြီး တော့ ဟိုထောင့်နား က စားပွဲ မှာ သွားထိုင် စားပါလို့ ပြောခဲ့ တယ်. ကျွန်မ က ရှင် ကျွန်မ ကြောင့် ပြဿနာ တစ်ခုခု ဖြစ်မှာ ကို စိုးရိမ် နေခဲ့ပေမဲ့ ရှင်က ကျွန်မ စားတဲ့ အစား အစာ အတွက် ကျသင့်ငွေ ကို ကောင်တာ မှာ သွားရှင်း နေတာ တွေ့လိုက် ရတယ်။ ဒီတော့မှ အားလုံး အဆင်ပြေ သွားပြီ ဆိုတာ သိမှ စိတ်ချ လက်ချနဲ့ အစား ကို စားနိုင် ခဲ့တယ်။ ကျွန်မ ဘဝမှာ အဲဒီ အချိန်တုန်း က ဆာဆာ နဲ့ စားခဲ့ ရတဲ့ ဆင်းဒဝစ် လောက် ဘယ် အစား အသောက် ကမှ အရသာ မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ခုချိန် ထိ လည်း သတိရ နေ ပါတယ်။”
“ခင်ဗျား ဒီ နောက်ပိုင်း အလုပ် ရသွား ခဲ့သလား.. ” အဖိုးဂျက် က အမျိုးသမီး ကြီး ကို မေး လိုက်ပါတယ်..
“ဟုတ်တယ် သိပ် မကြာခင် မှာ ကျွန်မ ဟာ အလုပ် တစ်ခုကို ရလိုက် တယ်။ အလုပ် လုပ်တဲ့ အခါ သူများတွေ ထက် ပိုပြီး အလုပ်မှာ စေတနာ ထားတယ်။ ကြိုးစား တယ်။ ကျွန်မ က ငတ်ပြတ် တဲ့ ဘဝကို ရောက်ခဲ့ ဖူး တော့ ဒီဘဝ ကို ပြန် မသွား ချင် ဘူးလေ. ဒီတော့ ဘာလုပ် သလဲ… သူများ ထက် ပိုကြိုးစား ရတာပေါ့။ ကျွန်မ ရဲ့ ဇွဲ၊လုံ့လ အကျိုး ကြောင့် အချိန် နည်းနည်း ကြာ တဲ့ အခါ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း တစ်ခု ကို ထူထောင် လာနိုင်ခဲ့တယ်။ ကံတရား ရဲ့ ဖေးမမှု လဲ ပါတာ ပေါ့လေ။ ” စကား ပြောရင်း အမျိုးသမီ ဟာ သူမ ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် ကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ လိပ်စာ ကဒ်ပြားလေး တစ်ခု ကို ဆွဲထုတ် လိုက်ပြီး
“အန်ကယ် ဂျက်.. ရှင် ဒီမှာ စားသောက် ပြီးစီး တဲ့ အခါ ဒီ လိပ်စာ လေး အတိုင်း ရောက်အောင် သွားပြီး ကျွန်မ ရဲ့ ကိုယ်ရေး အရာရှိ နဲ့ သွားတွေ့ စေချင် တယ်.. ကျွန်မ တို့ ကုမ္ပဏီမှာ အန်ကယ် အတွက် သင့်တော် တဲ့ အလုပ် တစ်နေရာ ကို သူ စီစဉ် ပေးလိမ့်မယ်.. ပြီးတော့ အဝတ်အစား ဝယ်ဖို့၊ နေထိုင် စားသောက် ဖို့ ငွေ တစ်ချို့ ကို သူ ထုတ် ပေးလိမ့် မယ်၊ အန်ကယ် ကိုယ့် ခြေထောက် ပေါ် ကိုယ် ရပ်တည် နိုင်တဲ့ တစ်နေ့ အထိ ထောက်ပံ့ ပါလိမ့်မယ်။ အန်ကယ် ဘယ် လို အကူ အညီဘဲ လိုလို ကျွန်မ ဆီ လာခဲ့ပါ။ ကျွန်မ အန်ကယ် အတွက် အမြဲတမ်း တံခါးဖွင့် ထားပါ တယ် အန်ကယ် ဂျက်.. ”
အမျိုးသမီး ရဲ့ စကား အဆုံး မှာ အဖိုးအို ဂျက် ရဲ့ ပါးပြင်ပေါ် မှာ မျက်ရည် တွေ စီးကျ လာပါတော့ တယ်။ “ခင်ဗျား ကို ဘယ်လို ကျေးဇူး တင်ရမှန်း တောင် မသိ တော့ ပါဘူး ဗျာ” လို့ တုန်ယင် လှိုက်လှဲ နေတဲ့ အသံနဲ့ ပြောလိုက် ပါတယ်။
“ကျေးဇူး တင် ဖို့ မလိုပါဘူး အန်ကယ် ဂျက်ရယ်။ ကူညီ ထိုက်သူ ကို ကူညီရတာ ဝမ်းမြောက်စရာပါ။ အန်ကယ် ရဲ့ ကူညီ ထောက်ထား တတ်တဲ့ စိတ်ထား လေး ကို ကျွန်မ ဘယ်တော့ မှ မမေ့ ပါဘူး။ အန်ကယ် ကျွေး ခဲ့တဲ့ ဆင်းဒဝစ် နဲ့ ကော်ဖီ တစ်ခွက် ဟာ ကျွန်မ ဘဝ မှာ တန်ဖိုး အကြီးဆုံး အရာ တွေ ပါ… ဘယ်လို မှ တန်ဖိုး ဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ ကျွန်မ ကို ခုလို သူ တစ်ပါး ကို ကူညီ တတ်အောင် လမ်းစ ကို လမ်းပြ ခဲ့တဲ့သူ ကလဲ အန်ကယ် ဂျက် ကိုယ်တိုင် ပါ”
စားသောက် နေတဲ့ အဖိုးအို ဂျက် ကို နှုတ်ဆက် ပြီး နောက် အမျိုးသမီး နဲ့ ရဲအရာရှိဟာ ကော်ဖီဆိုင် ရဲ့ အပြင်ဘက် ကို ထွက်လာ ကြ ပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့ အရောက် မှာ တစ်ယောက် တစ်လမ်း ထွက်ခွာ မသွားခင် ဆိုင် အဝနားမှာ ခေတ္တ ရပ်ပြီး အမျိုးသမီး ဟာ ရဲ အရာရှိ ကို ကျေးဇူးတင် စကား ဆို ပါတယ်။
“ ရှင့်ရဲ့ အကူ အညီ အ တွက် ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ် ရဲ အရာရှိ မင်းရယ်.. ”
“အိုး ကျေးဇူးတင် ဖို့ မလိုပါဘူး မစ္စ အက်ဒီ .. ကျွန်တော် က တောင် ကျေးဇူးတင် ရမှာ ပါဗျာ.. ကျွန်တော် ဒီနေ့ သိပ် ထူးဆန်း အံ့သြ စရာ အဖြစ် အပျက် ကလေး ကို တွေ့လိုက် ရပါတယ်.. ဘယ်တော့ မှ မေ့နိုင် မဲ့ အဖြစ် အ ပျက် လဲ မဟုတ်ပါ ဘူး ဗျာ.. ကျွန်တော့် ရင်ထဲ ကို တော်တော် ထိပါ တယ်.. ခင်ဗျား ရဲ့ ကော်ဖီ အတွက်လဲ ကျေးဇူး ပါ မစ္စ အယ်ဒီ.. ”
ရဲ အရာရှိ ရဲ့ လက်ထဲ က ကော်ဖီခွက် ကို သတိရ လိုက်မိတဲ့ အမျိုးသမီး ဟာ “အိုး ရှင် ကော်ဖီ ကို ဘယ်လို သောက်တယ် ဆို တာ မေးဖို့ ကျွန်မ မေ့ သွားတယ် အခု ယူ လာတာ ကော်ဖီ က အချိုပေါ့ ထင် တယ်။ နို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ သကြား ဖြစ်ဖြစ် ထပ်ယူ မလား ” လို့မေး တော့ ရဲအရာရှိ ဟာ လက်ထဲက ကော်ဖီခွက် ကို ငုံ့ကြည့် လိုက်ပြီတော့ ပြုံးလိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော့
ကျွန်တော့် အ တွက် သကြား aတွ၊ နို့တွေ မလိုတော့ ပါဘူးဗျာ၊ ဒီနေ့ အန်ကယ် ဂျက် ကို ခင်ဗျား ပေးလိုက် တဲ့ စေတနာ၊ မေတ္တာ တွေ က သကြား တွေ နို့တွေ ထက် ချို ပါတယ်။ တန်ဖိုး လည်း ကြီး လှပါတယ်။ စေတနာ မေတ္တာ တို့၊ ကျေးဇူး သိတတ်ခြင်း တို့ ဆိုတာ ဘယ် အရာနဲ့ မှ မတူ အောင် ချိုမြိန် လှပါတယ်၊ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ လည်း အဲဒီ အချိုဓာတ် တွေ ကူးစက် ပြီး နောက်ထပ် ဘယ်လို သကြား မှ မလို တော့အောင် ပီတိတွေ နဲ့ ချိုနေ ပါပြီ ဗျာ။
Kindness ( Unknown Author ) ကို ဘာသာ ပြန် တာပါ။ ခုတလော စာ အသစ် မရေးဖြစ်သေး တာ ကြောင့် လွန်ခဲ့ တဲ့ ၂ နှစ် လောက် က ရေး ခဲ့တဲ့ ဒီပိုစ့်လေး ပြန်တင် ဖြစ် တာ ပါ။ နားလည် ခွင့်လွှတ်ပြီး ဖတ်ရှု ပေးကြ ပါလို့ တောင်းပန် ချင် ပါတယ်။ ဒီစာ ထဲက လို စေတနာ မေတ္တာ အပြည့်နဲ့ ကျေးဇူး သိ တတ်ခြင်း က သကြား ထက် ကို ချိုမြိန် လှပါတယ် ဆိုရင် ကျွန်မ တို့လဲ သကြား ထက် ချိုမြိန် တဲ့ အရာတွေ ကို ပေး နိုင်ဖို့ ကြိုးစား ကြပါဦး စို့လား နော်။
Credit : မချော( အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် )
သကွား ထကျ ခြိုသောအရာ
အသကျ အတျောကွီး နပွေီ ဖွဈတဲ့ လူကွီး တဈယောကျ ဟာ အေးစကျ မှုနျမှိုငျး နတေဲ့ လမျးဘေး ပလကျဖောငျး လေး တဈခု ပျေါမှာ ထိုငျနေ ခဲ့ပါတယျ။ မုတျဆိတျ ပါးသိုငျးမှေး ပရဗဈြ၊ စုတျပွဲ ညဈနှမျး နတေဲ့ အဝတျ အစား တှနေဲ့ လမျးဘေးမှာ ထိုငျနတေဲ့ သူ့ကို လမျးသှား လမျးလာ လူတှကေ သာမနျ ကာ လြှံကာ ကွညျ့သှား ကွရုံက လှဲလို့ ဘယျသူ ကမှ အရေး တယူ မရှိ ကွပါ။ ဟုတျပါ တယျလေ အိမျမရှိ ယာမရှိ တောငျးရမျး စားသောကျ နတေဲ့ သူ့လိုလူ တဈယောကျ ကို ဘယျသူ ကမြား ဆေးဖျော ကွောဖကျ လုပျခငျြ ပါ့မလဲ။ ရခေဲလု မတတျ အေးခမျြး လှနျးတဲ့ ခုလို ခြိနျမြိုးမှာ စုတျပွဲ နတေဲ့ သူ့ကုတျ အကငြ်္ီ အဟောငျး လေး ထကျ စာရငျ နှေးနှေး ထှေးထှေး ထူထူ ထဲထဲ ရှိမဲ့ အကငြ်္ီ မြိုးက သူ့ အတှကျ သိပျကို လိုအပျ နမှော တော့ အမှနျပါ။
ဒီအခြိနျလေး မှာ အသကျ ၃၅ နှဈ အရှယျခနျ့ ရှိတဲ့ အမြိုးသမီး တဈယောကျ ဟာ ပလကျဖောငျး လေး အတိုငျး လမျးလြှောကျ လာနပေါတယျ။ ပလကျဖောငျး ပျေါ လြှောကျ လာရငျးနဲ့ အမြိုးသမီး ဟာ ထို အဖိုးအို အနား ကို အရောကျမှာ ခွစေုံ ရပျတနျ့ လိုကျပါ တော့တယျ။ ပွီးတော့ သူ့ကို ငုံ့ကွညျ့ လိုကျကာ “ ဦးလေး .. ရှငျ နကေောငျး ရဲ့လား” လို့ နှုတျခှနျးဆကျ စကား ဆို လိုကျပါတယျ။ ကွညျ့ လိုကျ တာနဲ့ အမြိုးသမီး ဟာ ခမျြးခမျြး သာသာ အထကျတနျး လှာ ထဲက ဖွဈမယျ ဆိုတာ အဖိုးအိုက သိလိုကျ ပါတယျ။ သူမ ဟာ လှပ သဈလှငျတဲ့ ထူထူ ထဲထဲ ကုတျ အင်ျကြီကို ဝတျဆငျ ထားပွီး သနျ့ရှငျး သပျရပျ လို့ နပေါတယျ။ ပွီးတော့လဲ သူမ ကို ကွညျ့ရတာ ငတျမှတျခွငျး၊ ဆာလောငျခွငျး ဆိုတာ ကို ဘယျသော အခါမှ ခံစားခဲ့ရဖူးပုံ မပျေါပါ။ ဒီလို အမြိးသမီး တဈယောကျ က သူနဲ့ လာပွီး စကားပွောဆို ပတျသကျ ဖို့ဆိုတာ အကွောငျးကို မရှိဘူးလို့ သူက ထငျလိုကျ ပါတယျ။ ဒီ အ မြိုးသမီး ဟာ လညျး တဈခွား လမျးသှား လမျးလာ တှလေိုဘဲ သူ့ကို ရယျစရာ လုပျဖို့ စနောကျဖို့ သကျသကျနဲ့ စကား လာပွော နတော သာ ဖွဈမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ လဲ အမြိုးသမီးကို “ ခငျဗြား ကိုယျ့လမျးကို သှားပါ။ ကြုပျ တဈယောကျ တညျး အေးအေး နနေေ တာကို မနှောကျယှကျ စမျးပါနဲ့ ” လို့ အျောဟဈပွီး ပွော လိုကျပါတယျ။
အံ့သွ စရာက ထို အမြိုးသမီး ဟာ သူ့ရဲ့ အျောဟဈသံ ကို ကွောကျလနျ့ ပွီး ထှကျသှား တာမြိုး မဟုတျဘဲ နရောမှာ ဆကျပွီး ရပျနေ တုနျးပါ။ ညီညာပွီး ဖွူဖှေး လှပနတေဲ့ သှားတှကေို ပျေါအောငျ ပွုံး လိုကျရငျးက “ ရှငျ ဗိုကျဆာ နသေလား ” လို့ သူ့ကို မေးပွနျ ပါတယျ။ “ မဆာပါဘူး ကြုပျက သမ်မတကွီး နဲ့ အတူတူ ညစာ စားပွီးပွီ ခငျဗြား သာ ခု ခကျြခွငျး ဒီက ထှကျသှား စမျးပါဗြာ ” လို့ သူက စိတျပေါကျပေါကျ နဲ့ ရှဲ့ပွီး ပွနျဖွေ လိုကျ ပါတယျ။ အမြိုးသမီးဟာ သူ့အနားက ထှကျပွီး မသှား သလို အပွုံးလဲ မပကျြ ပါဘူး။ ပွီးတော့ သူ့ဘေးနား ထိုငျခြ လိုကျပွီး အဖိုးအို ရဲ့လကျမောငျးတှေ ကို အသာအယာ ဆုပျကိုငျ လိုကျခြိနျ မှာတော့ “ ဟာ ခငျဗြား ဘာလုပျ တာလဲ ကြုပျ ပွောပွီး ပွီလေ။ ကြုပျကို မနှောကျ ယှကျ ပါနဲ့။ ခငျဗြား ဒီနရော က ထှကျသှားပါ” လို့ အဖိုးအို ဆီက ဒေါသ တကွီး အျောဟဈသံ က ဟိနျးထှကျ လာ ပါတော့တယျ။
ဒီအခြိနျမှာ ရဲအရာရှိ တဈယောကျ ရောကျ လာပွီး “ အဈမကွီး ပွဿနာ တဈခုခု ဖွဈနေ သလား.. ကြှနျတျော ဘာမြား ကူညီ ပေးရ ပါမလဲ ” လို့ မေးလာ တော့ အမြိုးသမီးက “ ဘာ ပွဿနာ မှ မရှိပါဘူး ရဲအရာရှိ ကွီးရယျ။ ဒီလူကို မတျတပျရပျ နိုငျအောငျ ကြှနျမ ကွိုးစား နတောပါ။ ကြှနျမ ကို တဈဆိတျ လောကျ ကူညီ ပေးပါလား ရှငျ.. ” ရဲ အရာရှိ ဟာ သူ့ခေါငျး ကို ကုတျ လိုကျရငျး “ ဒီအဖိုးကွီး ဂကျြ ဟာ ဒီနရောမှာ နလောတာ နှဈ တျောတျော ကွာပါပွီ၊ သူဟာ ဘယျသူ့ကို မှ တော့ ဒုက်ခ မပေးခဲ့ပါဘူး၊ သူ့ကို ဘာမြား လုပျမလို့ ပါလဲ ” လို့ မေးလိုကျ ပါတယျ..
“ရှငျ ဟိုနား က ကျောဖီဆိုငျလေး ကို တှတေ့ယျ မဟုတျလား။ ကြှနျမ သူ့ကို အဲဒီဆိုငျလေး ထဲကို ချေါသှားပွီး တဈခုခု ကြှေးခငျြ တယျ။ ပွီးတော့လဲ ဒီလောကျ ခမျြးအေး လှနျး တဲ့ ရာသီဥတု ဒဏျကနေ ခနလေး ဖွဈဖွဈ သူ့ကို လှတျမွောကျ စခေငျြပွီး နှေးနှေး ထှေးထှေး နစေေ ခငျြ ပါတယျ ”
“ ခငျဗြား ရူး နသေလား ကြုပျ အဲဒီ အထဲကို မသှားခငျြဘူး ” အကွောကျ အကနျ ငွငျးဆနျ နရေငျး မှာဘဲ သနျမာတဲ့ လကျနှဈဖကျ တှနေဲ့ သူ့ကို ဆှဲထူ မခွငျး ကို ခံလိုကျ ရပါတယျ။ “ ရဲ အရာရှိကွီး ကြုပျကို လှတျပါဗြ.. ကြုပျ အေးအေး ဆေးဆေး နပေါ ရစေ၊ ကြုပျ ဘာအမှား မှလဲ လုပျထား တာ မဟုတျဘူး ” လို့ ဆိုငျ ကို ဆှဲချေါ လာတဲ့ လမျး တဈလြှောကျ မှာ လညျး အဖိုးအို ဂကျြ ဟာ အျောဟဈ ရုနျးကနျ နတေုနျး ပါဘဲ။
“ ခငျဗြား အတှကျ အကောငျးဆုံး အခွအေနေ ကို ဖနျတီး ပေး နတော ကို မမိုကျမဲ ခငျြ စမျးပါနဲ့” ရဲ အရာရှိ က လသေံ ခပျမာမာနဲ့ သူ့ကို ပွနျပွော ပါတယျ။ နောကျဆုံးတော့ အမြိုးသမီး ကွီးနဲ့ ရဲအရာရှိ ဟာ ခကျခကျ ခဲခဲနဲ့ သူ့ကို ကျောဖီ ဆိုငျလေး ထဲကို ရောကျအောငျ ဆှဲချေါ လာ နိုငျခဲ့ပွီး ဆိုငျရဲ့ အတှငျး ဘကျ ခပျကကြ ကောငျတာ အနီး မှာ ထိုငျစေ လိုကျပါတယျ။ အခြိနျ က မနကျစာ စားခြိနျ ကြျောသှားပွီး နလေ့ညျစာ စားခြိနျလဲ မရောကျသေး တဲ့ အတှကျ ဆိုငျ အတှငျး ထဲမှာတော့ လူသူ ရှငျးလငျး နပေါတယျ။ ဆိုငျရဲ့ မနျနဂြော ဖွဈသူ ဟာ စားပှဲ တှကေို ကြျောဖွတျ ပွီး သူတို့ရဲ့ စားပှဲ မှာ လာရပျ ပွီး မေးပါတယျ။
“ ရဲအရာရှိ ခငျဗြာ.. ဘာမြား ဖွဈလို့ ပါလဲ.. ဒီအဖိုးကွီး က ခငျဗြား တို့ကို ဒုက်ခမြား ပေးနေ လို့လား ”
“ ဘာမှ ဒုက်ခ မပေး ပါဘူး။ သူ့ကို ဒီအဈမကွီး က အစားအသောကျ ကြှေးမှေး ခငျြလို့ ချေါလာ တာပါ.. ” ရဲအရာရှိရဲ့ စကား အဆုံးမှာ “ အိုး ဒီနရော ဟာ ဒီလို လူမြိုးတှေ နဲ့ သငျ့ တျောတဲ့ နရော မဟုတျ ပါဘူး ခငျဗြာ။ ကြှနျတျော တို့ ဆိုငျဟာ လူကွီး လူကောငျးတှေ ဝငျထှကျ သှားလာ စားသောကျ တဲ့ ဆိုငျ ဖွဈပါတယျ။ လမျးပျေါ က ဒီလို စုတျပွတျပွတျ လူ တဈယောကျ က ကြှနျတျော တို့ ဆိုငျထဲမှာ လာ စားနတော သူမြားတှေ တှေ့ သှားရငျ ဆိုငျနာမညျ ပကျြပွီး ကြှနျတျော တို့ ဆိုငျရဲ့ စီးပှားရေး ကို ထိခိုကျ ပါလိမျ့မယျ။” လို့ ဆိုငျ မနျနဂြော က ပွောလိုကျ ပါတယျ။
“ ကဲ အမြိုးသမီး ခငျဗြား တှတေ့ယျ မဟုတျလား။ ကြုပျပွော ခဲ့သား ဘဲ .. ဒီလို နရော ကို ကြုပျ မလာခငျြ ပါဘူးလို့.. ကြုပျ သှားတော့ မယျ၊ ဒီလို နရောမြိုး ကိုလဲ ဘယျတော့မှ ထပျ မလာဘူး.. ” အဖိုးအို ဂကျြက သှား တဈခြောငျးမှ မရှိတော့တဲ့ နှုတျခမျး တှေ ကို ဖှငျ့ဟရငျး ဒေါသ ဖွဈစှာ ပွော လိုကျပါတယျ။
အမြိုးသမီး ဟာ ဆိုငျရဲ့ မနျနဂြော ကို သခြော ကွညျ့လိုကျပွီး ပွုံးပွ လိုကျရငျးက “ မနျနဂြော.. ရှငျ ဒီလမျးမကွီး ပျေါမှာ ရှိတဲ့ အကျဒီဂရုပျ ရဲ့ ဘဏျ လုပျငနျး စုကွီး ကို သိတယျ မဟုတျ လား. ” လို့ မေး လိုကျပါတယျ။ ဒီတော့ ဆိုငျမနျနဂြော က စိတျမရှညျ တဲ့ လသေံနဲ့ “ သိပါတယျ.. သူတို့ဟာ အပတျစဉျ တိုငျး ကုမ်ပဏီ အစညျးအဝေး ကို ကြှနျတျော တို့ဆိုငျရဲ့ အထူးခနျး မှာ အမွဲ လုပျ ပါတယျ။ ဘာဖွဈ လို့ပါလဲ ” လို့ပွနျဖွေ ပါတယျ။
အမြိုးသမီးက “ ဒါဆိုရငျ ရှငျတို့ ဆိုငျမှာ လုပျတဲ့ သူတို့ရဲ့ အပတျစဉျ အစညျး အဝေး ကွောငျ့ ရှငျတို့ဆိုငျ ရဲ့ အစားအသောကျတှေ ပိုပွီး ရောငျး ခဲ့ရတဲ့ အတှကျ သူတို့ဟာ ရှငျတို့ဆိုငျကို တဈဘကျ တဈလမျး က အကြိုးပွု နတေယျ ဆိုတာတော့ ရှငျ လကျခံတယျ မဟုတျလား.. ”
“အဲဒီကိစ်စ ခငျဗြား နဲ့ မဆိုငျဘူးလို့ ထငျ ပါတယျ.. ” မနျနဂြော က ဒေါသ ထှကျ လာပုံ ရတဲ့ လသေံ နဲ့ ပွနျပွော ပါတယျ။
“ကြှနျမ က အဲဒီ ဘဏျ လုပျငနျးစုရဲ့ အမှုဆောငျ အရာရှိ ခြုပျ မစ်စ ပငျနီလုပျ အကျဒီ ပါ.. ”
“ဗြာ…. ” အမြိုးသမီး ရဲ့ နာမညျ လညျး ကွား လိုကျရော မနျနဂြော ရဲ့ အမူအယာ က ခငျြခွငျး ဘဲ ပွောငျးလဲ သှားပါတယျ.။
အမြိုးသမီး က နောကျ တဈကွိမျ ထပျပွုံးလိုကျရငျး “ကြှနျမက ခါတိုငျး လုပျတဲ့ အဲဒီပှဲနဲ့ မတူတဲ့ စားသောကျ ပှဲလေး တဈခု ကို အခု ခကျြခွငျး ကငျြးပ ခငျြပါတယျ။ ရှငျတို့ဆိုငျရဲ့ အကောငျး ဆုံး စားသောကျ စရာတှေ ယူလာ ခဲ့ပါ.. ”
စားပှဲမှာ ရပျနေ ဆဲ ဖွဈတဲ့ ရဲအရာရှိ ကို တဈခကျြ ကွညျ့လိုကျပွီး “ ရဲ အရာရှိကွီး ကိုလညျး ကြှနျမတို့ နဲ့အတူတူ စားသောကျ ဖို့ ဖိတျချေါ ပါတယျ.. ”
“တျောပါပွီ ခငျဗြာ ကြေးဇူးပါ.. ကြှနျတျော က တာဝနျ ခြိနျတှငျး ဖွဈနတေဲ့ အတှကျ စားဖို့ မဖွဈ နိုငျပါဘူး”
“ဒါဆိုရငျ အပွနျ ကို ကျောဖီ တဈခှကျ လောကျတော့ ယူသှား ပါရှငျ.. ”
“ကောငျး ပါပွီ ဗြာ .. ကျောဖီတော့ ယူသှား ပါ့မယျ.. ”
ရဲ အရာရှိ စကား အဆုံးမှာ မနျနဂြော က
“ကြှနျတျော ရဲအရာရှိ ယူ သှားဖို့အတှကျ ကျောဖီ တဈခှကျ ယူလာပေးပါ့မယျ.. ဒီဝိုငျး အတှကျ လဲ အကောငျးဆုံး အစား အသောကျ တှေ ကို ယူလာ ခဲ့ပါ့ မယျ ခငျဗြာ ” လို့ပွောပွီး မနျနဂြော က စားပှဲ ကနေ ထှကျခှာ သှား ပါတယျ။
မနျနဂြော ပွနျထှကျ သှားတာ ကို စောငျ့ ပွီး ရဲ အရာရှိ က အမြိုးသမီး ကို “ ခငျဗြား သူ့ကို လူမှနျ နရောမှနျ ဖွဈအောငျ လုပျပေး လိုကျတာဘဲ ” လို့ လှမျးပွော လိုကျ ပါတယျ..
“ ကြှနျမ ဒီလို တော့ မရညျရှယျ ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီလို ထုတျ မပွောရငျ မဖွဈတော့ တာမို့ ထုတျပွော လိုကျ ရတာပါ။ ကြှနျမ အနနေဲ့ အနျကယျ ဂကျြ ကို ဒီချေါ လာတာ အကွောငျး အမြားကွီး ရှိပါ တယျ..” လို့ ပွော လိုကျပွီး အမြိုးသမီး ဟာ ထိုငျခုံပျေါ ထိုငျခြ လိုကျပါတယျ. ထို့နောကျ အဖိုးကွီး ဘကျ ကို လှညျ့ပွီး စကား စတငျ ပွောပါတယျ။
“ အနျကယျ ဂကျြ… ရှငျကြှနျမ ကို မှတျမိ လား.. ”
အဖိုးအို ဂကျြ ဟာ အမြိုးသမီး ကွီးရဲ့ မကျြနှာ ကို သသေေ ခြာခြာ စူးစမျးစှာ ကွညျ့နပွေီး “ ကြုပျထငျတာ ခငျဗြားဟာ ကြုပျကို ရငျးရငျး နှီးနှီး သိနပေုံဘဲ”
“ဟုတျပါတယျ .. ကြှနျမ ရုပျရညျက ဟိုတုနျး ကထကျ ရငျ့ရျော သှားခဲ့ ပါပွီ.. အခု အခြိနျမှာ ငှကွေေး ဥစ်စာ အရာရာ ပွညျ့စုံ ကောငျး ပွညျ့စုံနေ ပွီ လို့ ဆိုနိုငျ ပမေဲ့ ကြှနျမရဲ့ ငယျစဉျ ကာလ ရှငျ ဒီဆိုငျ မှာ အလုပျ လုပျ ခဲ့ဖူးတဲ့ အခြိနျတှေ၊ အေးခဲ နတေဲ့ ခုလို ရာသီမြိုးမှာ ဆာလောငျ ငတျမှတျစှာနဲ့ လမျးတကာ လြှောကျပွီး အစားလေး တဈလုပျ အတှကျ ဆိုငျတှေ ဆီမှာ အလုပျတောငျး ခဲ့ရဖူး တဲ့ အခြိနျတှေ ကို ဘယျတော့ မှ မမပေ့ါ ဘူး ရှငျ…”
ဘေးနား က နားထောငျ နတေဲ့ ရဲအရာရှိ ထံမှ အံ့သွ တကွီး လသေံ က လှတျခနဲ ထှကျကြ လာပါတယျ.. ဒီလို ဂုဏျသရရှေိ အမြိုးသမီး တဈယောကျ ဟာ ဆာလောငျ မှတျသိပျစှာ နဲ့ လမျးတှေ ပျေါမှာ လြှောကျ သှားခဲ့ ဖူး တယျ ဆိုတာ ကို သူဘယျလိုမှ ယုံကွညျ လကျခံ နိုငျပုံ မရပါ။
အမြိုးသမီး က သူ့ဘဝ နောကျကွောငျး ကို စတငျပွီး ရှငျးပွ ပါတယျ။ “ ကြှနျမဟာ အဲဒီအခြိနျ က ကောလိပျကြောငျး က ထှကျလာ ကစ ဒီမွို့ကလေး ကို အလုပျရှာ ဖို့ ရောကျ လာပါတယျ.. ဒါပမေဲ့ ကံဆိုးခငျြ တော့ အလုပျ တဈခု တလမှေ ကို တျောတျော နဲ့ ရှာလို့ မရခဲ့ ပါဘူး။ ဘယျသူ ကမှ လညျး အလုပျ မပေး ခဲ့ကွ ပါဘူး။ နောကျဆုံးတော့ လကျထဲ မှာ ပွားစလေ့ေး နညျးနညျး ကလှဲလို့ ဘာမှ မကနျြတော့ တဲ့အခါ အခနျး ငှားခ မပေး နိုငျတော့ တဲ့ ကြှနျမ ကို အခနျး ပိုငျရှငျက မောငျးထုတျ လိုကျပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ဖဖေျောဝါရီ လ ရဲ့ ပွငျးလှနျး တဲ့ အအေးဒဏျ အောကျမှာ ခိုနား ရာ မရှိ၊ ငတျငတျ ပွတျပွတျ ဆငျးဆငျး ရဲရဲနဲ့ လမျးတှေ ပျေါမှာ လြှောကျသှား နခေဲ့ရငျး နောကျဆုံး မှာ ဒီနရော လေး ကို စားစရာ တဈခု တလေ ရလို ရငွား ရောကျလာ ခဲ့ပါတယျ။”
အဖိုးကွီးဂကျြ ဟာ ပါးစပျကို ဟလိုကျပွီး “ အိုး ကြုပျ မှတျမိပွီ။ အဲဒီ တုနျးက ကြုပျဟာ ဟိုနား က ကောငျတာ မှာ ရပျ နခေဲ့တာလေ။ ခငျဗြား က ကြုပျကို မေးတယျ.. အစား အသောကျ နညျးနညျး ပေးပါ.. ဆိုငျမှာ ရှိတဲ့ အလုပျ ကို လုပျပေး ပါ့မယျ လို့ တောငျးဆို တယျလေ။ ဆိုငျ ဝနျထမျး မဟုတျ တဲ့ အပွငျလူ ကို အလုပျ ခိုငျးတဲ့ အခကျြ ဟာ ဆိုငျရဲ့ စညျးကမျး ခကျြကို ဖောကျဖကျြ ရာ ကတြဲ့ အ တှကျ အလုပျ မပေး နိုငျပါဘူး လို့ ကြုပျက ပွောခဲ့ တယျေ လ။ ”
“ဟုတျကဲ့ .. ကြှနျမ သိပါတယျ အနျကယျ ဂကျြ။ အနျကယျ ဟာ ကြှနျမ တဈသကျ မွငျဖူး သမြှထဲမှာ အကွီးဆုံး ဖွဈတဲ့ အသား ညှပျ ဆငျးဝဈကွီး တဈခုနဲ့ ကျောဖီ တဈခှကျ ကို ပေးပွီး တော့ ဟိုထောငျ့နား က စားပှဲ မှာ သှားထိုငျ စားပါလို့ ပွောခဲ့ တယျ. ကြှနျမ က ရှငျ ကြှနျမ ကွောငျ့ ပွဿနာ တဈခုခု ဖွဈမှာ ကို စိုးရိမျ နခေဲ့ပမေဲ့ ရှငျက ကြှနျမ စားတဲ့ အစား အစာ အတှကျ ကသြငျ့ငှေ ကို ကောငျတာ မှာ သှားရှငျး နတော တှလေို့ကျ ရတယျ။ ဒီတော့မှ အားလုံး အဆငျပွေ သှားပွီ ဆိုတာ သိမှ စိတျခြ လကျခနြဲ့ အစား ကို စားနိုငျ ခဲ့တယျ။ ကြှနျမ ဘဝမှာ အဲဒီ အခြိနျတုနျး က ဆာဆာ နဲ့ စားခဲ့ ရတဲ့ ဆငျးဒဝဈ လောကျ ဘယျ အစား အသောကျ ကမှ အရသာ မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ခုခြိနျ ထိ လညျး သတိရ နေ ပါတယျ။”
READ ဘ၀ မှာ ဘယျတော့မှ နောငျတမရပဲ ၊ တဈသကျလုံးပြျောရှငျရမယျ့ ဆုံးဖွတျခကျြမြား👍👍
“ခငျဗြား ဒီ နောကျပိုငျး အလုပျ ရသှား ခဲ့သလား.. ” အဖိုးဂကျြ က အမြိုးသမီး ကွီး ကို မေး လိုကျပါတယျ..
“ဟုတျတယျ သိပျ မကွာခငျ မှာ ကြှနျမ ဟာ အလုပျ တဈခုကို ရလိုကျ တယျ။ အလုပျ လုပျတဲ့ အခါ သူမြားတှေ ထကျ ပိုပွီး အလုပျမှာ စတေနာ ထားတယျ။ ကွိုးစား တယျ။ ကြှနျမ က ငတျပွတျ တဲ့ ဘဝကို ရောကျခဲ့ ဖူး တော့ ဒီဘဝ ကို ပွနျ မသှား ခငျြ ဘူးလေ. ဒီတော့ ဘာလုပျ သလဲ… သူမြား ထကျ ပိုကွိုးစား ရတာပေါ့။ ကြှနျမ ရဲ့ ဇှဲ၊လုံ့လ အကြိုး ကွောငျ့ အခြိနျ နညျးနညျး ကွာ တဲ့ အခါ ကိုယျပိုငျ လုပျငနျး တဈခု ကို ထူထောငျ လာနိုငျခဲ့တယျ။ ကံတရား ရဲ့ ဖေးမမှု လဲ ပါတာ ပေါ့လေ။ ” စကား ပွောရငျး အမြိုးသမီ ဟာ သူမ ရဲ့ ပိုကျဆံအိတျ ကို ဆှဲဖှငျ့လိုကျပါတယျ.. ပွီးတော့ လိပျစာ ကဒျပွားလေး တဈခု ကို ဆှဲထုတျ လိုကျပွီး
“အနျကယျ ဂကျြ.. ရှငျ ဒီမှာ စားသောကျ ပွီးစီး တဲ့ အခါ ဒီ လိပျစာ လေး အတိုငျး ရောကျအောငျ သှားပွီး ကြှနျမ ရဲ့ ကိုယျရေး အရာရှိ နဲ့ သှားတှေ့ စခေငျြ တယျ.. ကြှနျမ တို့ ကုမ်ပဏီမှာ အနျကယျ အတှကျ သငျ့တျော တဲ့ အလုပျ တဈနရော ကို သူ စီစဉျ ပေးလိမျ့မယျ.. ပွီးတော့ အဝတျအစား ဝယျဖို့၊ နထေိုငျ စားသောကျ ဖို့ ငှေ တဈခြို့ ကို သူ ထုတျ ပေးလိမျ့ မယျ၊ အနျကယျ ကိုယျ့ ခွထေောကျ ပျေါ ကိုယျ ရပျတညျ နိုငျတဲ့ တဈနေ့ အထိ ထောကျပံ့ ပါလိမျ့မယျ။ အနျကယျ ဘယျ လို အကူ အညီဘဲ လိုလို ကြှနျမ ဆီ လာခဲ့ပါ။ ကြှနျမ အနျကယျ အတှကျ အမွဲတမျး တံခါးဖှငျ့ ထားပါ တယျ အနျကယျ ဂကျြ.. ”
အမြိုးသမီး ရဲ့ စကား အဆုံး မှာ အဖိုးအို ဂကျြ ရဲ့ ပါးပွငျပျေါ မှာ မကျြရညျ တှေ စီးကြ လာပါတော့ တယျ။ “ခငျဗြား ကို ဘယျလို ကြေးဇူး တငျရမှနျး တောငျ မသိ တော့ ပါဘူး ဗြာ” လို့ တုနျယငျ လှိုကျလှဲ နတေဲ့ အသံနဲ့ ပွောလိုကျ ပါတယျ။
“ကြေးဇူး တငျ ဖို့ မလိုပါဘူး အနျကယျ ဂကျြရယျ။ ကူညီ ထိုကျသူ ကို ကူညီရတာ ဝမျးမွောကျစရာပါ။ အနျကယျ ရဲ့ ကူညီ ထောကျထား တတျတဲ့ စိတျထား လေး ကို ကြှနျမ ဘယျတော့ မှ မမေ့ ပါဘူး။ အနျကယျ ကြှေး ခဲ့တဲ့ ဆငျးဒဝဈ နဲ့ ကျောဖီ တဈခှကျ ဟာ ကြှနျမ ဘဝမှာ တနျဖိုး အကွီးဆုံး အရာ တှေ ပါ… ဘယျလို မှ တနျဖိုး ဖွတျလို့ မရပါဘူး။ ကြှနျမ ကို ခုလို သူ တဈပါး ကို ကူညီ တတျအောငျ လမျးစ ကို လမျးပွ ခဲ့တဲ့သူ ကလဲ အနျကယျ ဂကျြ ကိုယျတိုငျ ပါ”
စားသောကျ နတေဲ့ အဖိုးအို ဂကျြ ကို နှုတျဆကျ ပွီး နောကျ အမြိုးသမီး နဲ့ ရဲအရာရှိဟာ ကျောဖီဆိုငျ ရဲ့ အပွငျဘကျ ကို ထှကျလာ ကွ ပါတယျ။ ဆိုငျရှေ့ အရောကျ မှာ တဈယောကျ တဈလမျး ထှကျခှာ မသှားခငျ ဆိုငျ အဝနားမှာ ခတ်ေတ ရပျပွီး အမြိုးသမီး ဟာ ရဲ အရာရှိ ကို ကြေးဇူးတငျ စကား ဆို ပါတယျ။
“ ရှငျ့ရဲ့ အကူ အညီ အ တှကျ ကြေးဇူးအထူး တငျပါတယျ ရဲ အရာရှိ မငျးရယျ.. ”
“အိုး ကြေးဇူးတငျ ဖို့ မလိုပါဘူး မစ်စ အကျဒီ .. ကြှနျတျော က တောငျ ကြေးဇူးတငျ ရမှာ ပါဗြာ.. ကြှနျတျော ဒီနေ့ သိပျ ထူးဆနျး အံ့သွ စရာ အဖွဈ အပကျြ ကလေး ကို တှလေို့ကျ ရပါတယျ.. ဘယျတော့ မှ မနေို့ငျ မဲ့ အဖွဈ အ ပကျြ လဲ မဟုတျပါ ဘူး ဗြာ.. ကြှနျတေျာ့ ရငျထဲ ကို တျောတျော ထိပါ တယျ.. ခငျဗြား ရဲ့ ကျောဖီ အတှကျလဲ ကြေးဇူး ပါ မစ်စ အယျဒီ.. ”
ရဲ အရာရှိ ရဲ့ လကျထဲ က ကျောဖီခှကျ ကို သတိရ လိုကျမိတဲ့ အမြိုးသမီး ဟာ “အိုး ရှငျ ကျောဖီ ကို ဘယျလို သောကျတယျ ဆို တာ မေးဖို့ ကြှနျမ မေ့ သှားတယျ အခု ယူ လာတာ ကျောဖီ က အခြိုပေါ့ ထငျ တယျ။ နို့ ဖွဈဖွဈ၊ သကွား ဖွဈဖွဈ ထပျယူ မလား ” လို့မေး တော့ ရဲအရာရှိ ဟာ လကျထဲက ကျောဖီခှကျ ကို ငုံ့ကွညျ့ လိုကျပွီတော့ ပွုံးလိုကျ ပါတယျ။ ပွီးတော့
ကြှနျတေျာ့ အ တှကျ သကွားတှေ၊ နို့တှေ မလိုတော့ ပါဘူးဗြာ၊ ဒီနေ့ အနျကယျ ဂကျြ ကို ခငျဗြား ပေးလိုကျ တဲ့ စတေနာ၊ မတ်ေတာ တှေ က သကွား တှေ နို့တှေ ထကျ ခြို ပါတယျ။ တနျဖိုး လညျး ကွီး လှပါတယျ။ စတေနာ မတ်ေတာ တို့၊ ကြေးဇူး သိတတျခွငျး တို့ ဆိုတာ ဘယျ အရာနဲ့ မှ မတူ အောငျ ခြိုမွိနျ လှပါတယျ၊ ကြှနျတေျာ့ ရငျထဲမှာ လညျး အဲဒီ အခြိုဓာတျ တှေ ကူးစကျ ပွီး နောကျထပျ ဘယျလို သကွားမှ မလို တော့အောငျ ပီတိတှေ နဲ့ ခြိုနေ ပါပွီ ဗြာ။
Kindness ( Unknown Author ) ကို ဘာသာ ပွနျ တာပါ။ ခုတလော စာ အသဈ မရေးဖွဈသေး တာ ကွောငျ့ လှနျခဲ့ တဲ့ ၂ နှဈ လောကျ က ရေး ခဲ့တဲ့ ဒီပိုဈ့လေး ပွနျတငျ ဖွဈ တာ ပါ။ နားလညျ ခှငျ့လှတျပွီး ဖတျရှု ပေးကွ ပါလို့ တောငျးပနျ ခငျြ ပါတယျ။ ဒီစာ ထဲက လို စတေနာ မတ်ေတာ အပွညျ့နဲ့ ကြေးဇူး သိ တတျခွငျး က သကွား ထကျ ကို ခြိုမွိနျ လှပါတယျ ဆိုရငျ ကြှနျမ တို့လဲ သကွား ထကျ ခြိုမွိနျ တဲ့ အရာတှေ ကို ပေး နိုငျဖို့ ကွိုးစား ကွပါဦး စို့လား နျော။
Credit : မခြော( အစိမျးရောငျလှငျပွငျ )